Safiirka Mareekanka u fadhiya Soomaaliya oo soo dhaweeyay Heshiiskii Dhex Maray Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Maamulka Puntland |
Safiirka Mareekanka u fadhiya Soomaaliya oo soo dhaweeyay Heshiiskii Dhex Maray Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Maamulka Puntland
Cialis Super Active for sale, clomid without prescription. Wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya James P. McAnulty waxa uu soo dhoweynayaa heshiiskii taariikhigaa ahaa ee 14kii October lagu saxiixay magaalada Garowe, kaas oo u dhaxeeyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland.
Heshiiskasi oo ka koobnaa laba iyo tobonka qodob oo muhiimka ah ayaa aasaas weyn u ah geedi socodka dhismaha qaranka.
“Heshiiskan waxa uu muujiyay sida ay uga go’an tahay labada dhinac in ay tusaale u noqdaan qorshayaasha socda iyo wada hadalka mustaqbalka dhex maraya dowladda federaalka ah iyo xubnaha maamulada ku mideysan federaalka si loogu sii socdo dhismaha nabadda, ammaanka iyo deganaanshaha ee dhammaan Soomaaliya,heshiiskan wuxuu sidoo kale xaqiijinayaa kaalinta dowladaha federaalka ah ee ku aadan fahamka dastuurka ee arrimaha federaalka” ayuu yiri James P. McAnulty.
Wakiilka Mareykanka ee Soomaaliya James P. McAnulty ayaa u mahad celiyey Qaramada Midoobay, Urur Goboleedka IGAD iyo Midowga Yurub oo fududeeyey heshiiskasi taariikhiga ah. Mareykanka waxaa si buuxda uga go’an taageeridda dowladda federaalka iyo maamulka Puntland dadaalkooda wada jirka ah ee lagu horumarinayo Soomaaliya, kaas oo si dhab ah uga turjumaya ajandahooda ku aadan nabadda iyo dhismaha dowladeed. Mareykanka waxa uu diyaar u yahay taageeridda hirgalinta heshiiskasi. Waxaan ku boorineynaa is-baheysigaan cusub ee la xoojiyay in uu ka faa’iideysto awoodda geedi socodka dhismaah qaran iyo sii socoshada horumarka bilaha soo socda si dib loogu eego, loona hirgaliyo dastuurka federaalka ah iyo xaqiijinta doorashooyin la qabto 2016ka.